Soo dejisan Avast Free Antivirus 20.10.5824 – Windows – Vessoft
WindowsAmnigaAntivirusesAvast Free Antivirus
Bogga rasmiga ah: Avast Free Antivirus
Avast Free Antivirus – oo ah badeeco antivirus caan ah oo leh muuqaalada nabadgelyo oo cusub iyo khataraha caqliga. Software waxay bixisaa badbaado aad u wanaagsan internetka iyada oo ay ugu wacantahay tiknoolajiyada ilaalinta ee ka hortaga shabakadaha internetka iyo sheyda kale ee shabakadaha. Avast Free Antivirus waxay taageertaa qaababka kala duwan ee taranka oo ay ku jiraan qaab caqli ah oo ogaanaya goobaha khatarta ah iyo nadaafadda oo samayn kara nidaamka nugul. Software wuxuu baari doonaa guriga Wi-Fi, wuxuu ogaadaa daciifintiisa iyo jebinta amniga. Barnaamijka "Avast Free Antivirus" wuxuu baaritaan ku sameeyaa barnaamijyo loogu talagalay koodhka xun iyo kormeerida dabeecadooda si loo xakameeyo wax kasta oo shaki ku jiro. Sidoo kale, Avast Free Antivirus waxaa ku jira maamulaha sirta ee dhismaha, kaas oo awood u leh inuu abuuro ama abuuro ereyga furan ee xooggan si uu u ilaaliyo dhammaan ereyada isticmaalaha.
Difaaca viruska iyo difaaca
Sawirro qoto dheer leh
Falanqaynta shabakada iyo habdhaqanka software
Kordhinta shabakada ilaalinta
Soo dejisan Avast Free Antivirus
Faallo ku saabsan Avast Free Antivirus
Avast Free Antivirus Xirfadaha la xiriira